Qalabka & Qalabka korontada Warar iyo Sheekooyin by Alietc.com - Alietc.com
Waxyaabaha ugu sareeya ee ku shaqeeya cadceedda suuqa
Liiska alaabada ku shaqeeya cadceedda: Qaboojiyaha cadceedda Qaboojiyaha qoraxda wuxuu horseedaa nidaam kasta oo qaboojiye ah (qaboojin) ah kaasoo adeegsada tamarta qorraxda. Tan waxaa lagu samayn karaa qorraxda oo xasilloon, beddelka tamarta kuleylka ee qorraxda, iyo koritaanka sawir-qaadista. Kiciye Solar Charger-ka qorraxda waa xeedho ku shaqeeya tamarta cadceedda si loo siiyo koronto aaladaha ama baytariyada. Waxay […]Read More
Kala hadal noocyada kala duwan ee fiilooyinka fiilooyinka iyo shirarka fiilooyinka ee suuqa
Fiilada korontada: Fiilooyinka korontada waxay isku habeeyaan hal ama dhowr xarig oo dhinac dhinac ka shaqeynaya ama isku duuban, oo loo adeegsan jiray in lagu qaado korontada. Isku soo wada duub fiilada ayaa ah sameynta hal ama in ka badan fiilooyin koronto iyo isku xirayaasha la midka ah. Isku soo wada duub fiilada ma aha mid si sax ah ugu habboon isku xirka laba qalab. Hase yeeshe, waxay noqon kartaa mid saameyn wanaagsan ku [Read More
Dhamaan Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato iskuxirayaasha & Terminalka
Xidhiidhiyeyaasha: Waa mashiin koronto ku shaqeeya oo loo adeegsado in lagu biiro dariiqyada korantada loona sameeyo wareegga korantada. Inta badan iskuxirayaasha korantada waxay leeyihiin jinsi - yacni, curiye lab ah, oo la yiraahdo fur, wuxuu ku xiraa curiyaha dheddigga, ama godka. Lifaaqa waxaa laga yaabaa inuu yahay mid la dhaqaajin karo (sida qalabka la qaadan karo), wuxuu u baahan yahay qalab loogu talagalay + isku imaatinka iyo bedelkiisa, ama […]Read More
Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Xiriiriyaha
Waa maxay Contactor? Xiriiriyaha waa furaha korontada lagu maamulo ee loo dalbado inuu beddelo wareegga saameynta korantada. Koorso caadi ahaan waxay amraysaa xiriiriye leh awood aad u hooseysa marka loo eego wareegga wareegga, sida 24-volt gariiradda electromagnet tijaabinta mashiinka 230-volt. Si ka duwan gudbinta naqshadeynta caadiga ah, xiriiriyeyaasha waxaa loogu talagalay inay si toos ah isugu xirnaadaan [Read More
Qalabka Awoodda Qeybinta Korantada ee suuqa
Muxuu Yahay Qalabka Qaybinta Korontada? Qalabka qaybinta korantada waxay si wax ku ool ah ugu gudbiyaan ugana keenaan tamarta korontada adeegga soo saarida korontada illaa galka derbigaaga ama rakibidda iftiinka. Ujeeddooyinka warbixintan, waxaan tixraaci doonaa oo keliya dalbashada qalabka la dhigo gudaha dhismaha caadiga ah. Inta badan mashiinada noocan ah uma muuqdaan aakhirka isticmaalaha [...]Read More
Waxsoosaarayaasha Ugu Sareeya, kuwa Dhoofiya iyo kuwa Keena Qalabka Korontada
Qalabka korontada: Qalabka korontada wuxuu daboolayaa wax kasta oo ka imanaya sahayda korantada ee AC iyo DC ilaa isku xirayaasha korantada, qalabka nalalka, iyo siligga. Kaydka kale ee korontada loo isticmaalo guud ahaan waa baytariyada, jeegaga, shidmayaasha, qallajiyeyaasha, iyo boosteejooyinka. Ficil ahaan shey kasta oo loo isticmaalo ama ku shaqeeya nidaamka korantada waxaa lagu qiyaasaa sahay koronto. Kuwa sahaminaya aalado gaar ah waxay noqon karaan […]Read More
Mowduuca guud ee korantada iyo sida ay u shaqeeyaan matoorrada korantada
Mashiinka korontada: Mashiinka korontadu waa aalad koronto oo tamarta korantada u rogeysa tamar farsamo. Inta badan matoorrada korantada waxay ka shaqeeyaan iskaashiga u dhexeeya mashiinka mashiinka aan la adkeysan karin iyo korantada ee siligga wareejinta si loo soo saaro xoog qaab xaddiga looga faa'iideysto mashiinka mashiinka. Matoorrada korantada waxaa lagu shaqeeyn karaa iyadoo toos loo […]Read More
Fiiri Gaaban oo ku saabsan Batariyada korantada ee Aragtida Ganacsiga
Baytariyada: Batariga wuxuu ka kooban yahay unugyo koronto ku shaqeeya oo leh xiriirro muuqda oo awood u leh qalabka korontada sida tooshashka, taleefannada gacanta, iyo baabuurta korontada ku shaqeeya. Marka bateriga uu soo saarayo koronto, xadka dhabta ah waa cathode, xaggeeda xunna waa anode. Terminaalka la calaamadeeyay ee aan la xiiseyneynin waa isha ay ka soo burqaneyso maraya […]Read More
Guudmarka Suuqyada & Mashiinka Mashiinka Mashiinka Guud
Waa maxay Metallurgy? Metallurgy waa shaqo cilmiga biraha iyo injineernimada oo baareysa soo noqoshada jirka iyo kiimikada ee walxaha macdanta, iskudhisyada ay ka koobanyihiin macdanta, iyo iskudarkooda. Metallurgy waxay ka kooban tahay sayniska iyo teknolojiyadda walxaha. Taasi waa, sida sayniska loogu adeegsado wax soo saarka biraha iyo injineernimada walxaha biraha loo isticmaalo […]Read More
Ka wada hadal dhammaan wixii ku saabsan Qolalka Cadceedda ee Solar Panel
Unugga Cadceedda: Waa unug qorraxda ku shaqeeya, sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay unug sawir qaade ah, qalab kasta oo si toos ah tamarta nalka ugu beddelaya tamarta korantada ee ku jirta saameynta sawir-qaadista. Qaangaarnimada xoogga leh ee unugyada qorraxda waxay hagaajineysaa waxtarka waxayna hoos u dhigeysaa qiimaha maaddaama cunsurradu ay u dhexeeyaan amorphous illaa polycrystalline ilaa noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'crystalline' (hal madal oo keliya). Si ka duwan baytariyada ama unugyada shidaalka, qoraxda…Read More